स्वादबिनाको ‘दाल भात तरकारी’
शुक्रबार संवाददाता ,शुक्रबार, २० बैशाख २०७६
निर्माण पक्षले ‘दाल भात तरकारी’ स्वादिलो भएको दावी गर्यो तर फिल्मको स्वाद नमिठो भयो । फिल्म रिलिज अगाडि निर्माण टोलीबाट जे जस्ता दावी आए ती सबै दर्शकलाई हलसम्म तान्ने उपाय मात्र देखिए ।
अठार महिनामा ‘डढेलो’
पछिल्लो समय लोकप्रिय रहेका गायक विपुल क्षत्रीलाई सुन्नुभएको छ ?
दुई राजेशको मित्रता गीतमा
अभिनेता राजेश हमाल र गायक राजेशपायल निकै मिल्छन् । नाम एकै भएकाले उनीहरू एकअर्कालाई ‘मित’ भनेर सम्बोधन गर्छन् ।
पल–आँचल प्रेम चर्चा
म्युजिक भिडियोका चर्चित मोडल हुन्, पल शाह । उनी यतिबेला अभिनेत्री आँचल शर्माको प्रेममा रहेको चर्चा मनोरञ्जन वृत्तमा चलेको छ ।
अवार्डः मनोनयनमै मनपरी
अघिल्लो साता आठौँ डी–सिने अवार्डको उत्कृष्ट पाँच मनोनयन पोखराबाट सार्वजनिक भयो । आयोजक यो अवार्ड नबाँडिदै विवादमा पर्यो।
आइजेन्स्टाइनको चिठी गोयबल्सलाई
‘ब्याटलसिप पोटेम्किन’ सर्गेइ आइजेन्स्टाइनले बनाएको रुसी भाषाको सोभियतकालीन चलचित्र थियो । यसले संसारभर धेरैको ध्यान खिच्यो ।
‘साथीका सिफारिसमा फिल्म हेर्छु’
कहिलेकाहीँ समाजसँग जोडिएका र साथीहरूले ‘रिफर’ गरेका फिल्म हेर्छु ।
राजधानीमा एक कार्यक्रम चलिरहँदा केही कलाकार भने यसरी मोबाइलमै मग्न देखिए ।
कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने हास्य टेलिसिरियल ‘डिट्ठा सा’ब’ हेर्नुभएको छ भने ‘नारायण बाजे’लाई त पक्कै चिन्नुहुन्छ होला ।
‘बी–बोइङ’ मा मग्न तन्नेरी
संगीतको तालमा केही युवा हत्केलाको सहायताले जीउ नचाइरहेका हुन्छन् । कोही हात र टाउकोले टेकेर फनफनी नाच्छन् ।
भर्खर १८ का राजेशपायल !
सबैलाई थाहा होला– गायक राजेशपायल राई अझै अविवाहित छन् । उनले ‘मित’ मानेका राजेश हमालले बिहे गरिसके, अब उनलाई बिहे कहिले गर्ने भन्ने प्रश्नले छाडेको छैन ।
‘ट्रोल’मा रमाउने अनमोल
अभिनेता अनमोल केसीको लोकप्रियतासँगै सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल बनाएर हँसीमजाक गर्ने र उडाउने काम पनि भइरहेको छ ।
के गर्दै छिन् प्रियंका अमेरिकामा ?
अभिनय गर्ने भनेर सम्झौता गरिसकेको फिल्म ‘मरिना’लाई छाडेर अभिनेत्री प्रियंका कार्की यतिबेला अमेरिका पुगेकी छिन् ।
टिप्पणी : मधेशको मजाक र मनोरञ्जन
अझ दयालाग्दो स्थिति त ती कलाकारहरूको छ जो आफूलाई सेलिब्रिटी भनाउनका लागि जस्तोसुकै भूमिकामा देखिन पनि तयार भएका छन् । शासक वर्गले जोकर बनाए ...
एउटा निर्देशकः जो अझै जिउँदो छ
इरानी चलचित्र हेर्नमा जति सुन्दर छन्, चलचित्रकर्मीका लागि त्यहाँको परिवेश त्यति नै कुरूप छ । असाध्यै ठूलठूला चुनौतीका बीच चलचित्रकर्मी काम गरिरहेका छन् ।
‘स्रोताको माया नै सबथोक’
लामो समय स्टेज कार्यक्रममा गाएँ । बीचमा यो क्षेत्र छाडेँ । अहिले तीन वर्षअघि पहिलो एल्बम ‘मुटुमा चोट’ ल्याएर फेरि संगीत क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँ ।
बलिउडका दुई प्रेमकथा
हेमा मालिनी र धर्मेन्द्रको भेट पहिलो पटक ख्वाजा अहमद अब्बासको फिल्म ‘आसमान महलको प्रिमियरका क्रममा सन् १९६५ मा भएको थियो । त्यतिबेलासम्म धर्मेन्द्र फिल्म इन्डस्ट्रीमा सुपरस्टारका रूपमा स्थापित भइसकेका थिए ।
नीताको भिडियो प्रेम
अभिनेत्री नीता ढुगांना फिल्ममा खासै जम्न सकेकी छैनन् । उनले निकै आशा राखेको फिल्म ‘फूलैफूलको मौसम तिमीलाई’ पनि हलमा चल्न सकेन ।
चर्चामा आउने काइदा
फिल्म चपली हाइटमा ‘बोल्ड’ सिन दिएर चर्चामा आएकी अभिनेत्री विनिता बरालका त्यसपछिका कुनै पनि फिल्म चलेनन् । जब उनले अभिनय गरेका फिल्म फ्लप हुन थाले त्यसपछि उनी चर्चामा रहिरहन विभिन्न फन्डा गर्न थालिन् । अग्र्यानिक खेती गर्ने भन्दै टोखामा तरकारी खेती गरेको हल्लीखल्ली गरिन् ।
करिश्मा मानन्धरलाई आठ अभियोग
चौध वर्षको उमेरमा फिल्म ‘सन्तान’बाट तीन दशकअघि अभिनयमा प्रवेश गरेकी अभिनेत्री हुन्, करिश्मा मानन्धर । ‘ट्रक ड्राइभर’, ‘ढुकढुकी’, ‘बाबुसाहेब’ उनका रुचाइएका फिल्म हुन् । उनी अभिनीत फिल्म ‘हिरोज’ प्रदर्शनको तयारीमा छ । भर्खरै उनले राजनीतिमा प्रवेश गरेकी छिन् । उनीबारे नेपाली फिल्म जगतमा सुनिने कुराका आधारमा अनिल यादवले उनलाई आठ अभियोग लगाएका छन्, जसको सफाइ उनले यसरी दिएकी छिन् ।
फेरि ‘पोइ’ कै कुरा
कोमल वलीले ‘पोइ चाहियो’ भन्दै गीत गाउन थालेको १० वर्ष भइसक्यो । ‘पोइल जान पाम’ भन्दै तीज गीत गाउन थालेकी कोमलले तीजमा शिवजीलाई समेत आग्रह गरिन् । तर, अझैसम्म उनी अविवाहित नै छिन् । यही कारण हुन सक्छ, उनले यही सन्दर्भमा पटकपटक गीत गाइरहेकी छिन् ।